Kafalcelinta Fayraska Korona ee NJP | Northwest Justice Project
Kafalcelinta Fayraska Korona ee NJP
Hadafka NJP waa in la ilaaliyo heerka ugu sarreeya ee suurogalka ah ee adeegyada macaamiisha gobolka inta lagu jiro xaaladda degdegga ah ee korona fayras. NJP waxay sidoo kale isha ku haysaa xaalada si ay u aqoonsato wixii isbedel ah ee loo baahan yahay si looga jawaab-celiyo sida ugu wanaagsan ee looga jawaabi karo baahiyaha macaamiisha ay saameysey waxyeelada degdegga ah ee korona fayras.
Adeegyada iyo hawlgallada NJP ee hadda jira waa sida soo socota:
CLEAR – Adeegyada khadka tooska ah ayaa si caadi ah u socda (saacado la qorsheeyey - maalmaha toddobaadka inta u dhexeysa 9:15 subaxnimo iyo 12:15 duhurnimo). Hadba sida ay xaaladdu isku bedesho, waxaan isbedelada ku soo wargelin doonnaa halkan.
Washington LawHelp waxay sii wadi doontaa inay ka warbixiso wararka iyo macluumaadka sharciyeed (eeg: Bogga Kheyraadka ku saabsan Korona Fayras ee Washington LawHelp).
Xafiisyada Goobaha: Iyada oo la waafajinayo hagida masuuliyiinta caafimaadka bulshada ee ku saabsan faafitaanka korona fayraska ee sii kordhaya, Gudoomiyaha Inslee's - iyo heer degmo - amarada iyo tilmaamaha, NJP ayaa qaadaysa tillaabooyinka soo socda:
Xafiisyada goobeedka NJP waxay u wareegayaan adeegyada fog (la isticmaalo taleefan ama iimeyl) laga bilaabo Isniinta, Maarso 16, 2020.
Tani waxay ka dhigan tahay in xafiisyada NJP ay isticmaali doonaan isgaarsiinta taleefanka ama fiidiyowga ah hadba sidii suurta gal ah - xafiisyaduna way ka xiran yihiin dadweynaha.
Xafiisyadu waxay qabanqaabooyin kala duwan la sameynayaan macaamiisha hadda jira ee leh ballamo soo socda iyo kulamo kale ee la qorsheeyay. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan kiiskaaga ama la kulanka u doodahaaga, fadlan la xiriir udoodaha adiga ku caawinaya.
Weydiimaha ay tahay in xafiiska loo imaado iyo macaamiisha hore ee imanaya xafiiska ballan la'aan waxay wici doonaan lambarka albaabka lagu dhejiyay.
Hadaadan ahayn macmiil hore oo aad u baahantahay caawimaad xaga sharciga ah,
fadlan wac 2-1-1 King County
Khadka tooska ah ee CLEAR: 1-888-201-1014 dhamaan gobolada kale
NJP waxay si dhaw ula socotaa saameynta fayrasku ku yeelan karo bulshooyinka macmiilka ah si loo garto tallaabooyinka kale ee lagama maarmaanka ah hadba sida ku habboon.
Haddii aad isku aragto astaamaha korona fayras (Fiiri: astaamaha la xiriira COVID-19), fadlan guriga joog oo la xiriir bixiyehaaga daryeelka caafimaadka.